QALABKA KULEYLKA EE LOO YAQAAN "THERMOSTAT": TILMAAMAHA DIY - KUFSI
Horumarinta guusha ee ukunta ayaa noqon karta mid aan suurtogal ahayn haddii aysan jirin xaalado heerkulka oo deggan. Nidaamkan waxaa bixiya heerkul caadi ah oo loogu talagalay kiniiniga, kaasoo haynaya heerkul ah ± 0.1 ° C, halka ay u kala duwanaan karto heerkulku inta u dhaxaysa 35 ilaa 39 ° C. Shuruudahan oo kale waxay ku jiraan aalado badan oo dijital ah iyo qalabka analogga ah. Isticmaalida heerkul aad u fiican oo sax ah ayaa lagu sameyn karaa guriga, haddii aad leedahay xirfadahan aasaasiga ah iyo aqoonta elektaroonikada.
Mabda'a hawlgalka qandhada - jawaab celin, oo mid ka mid ah tirada xaddidan ay si aan toos ah saameyn ugu yeelanayso kuwa kale. Nafaqada dabiiciga ah ee shimbiraha, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo heerkulka la doonayo, sababtoo ah xitaa qallaf yar iyo kala-soocidu waxay saameyn kartaa tirada shimbiraha dillaacsan - heerkulbeegga uuminta waa ujeedadan.
Qalabku wuxuu ciribtirayaa walxaha si uusan kuleylku u badnayn xitaa isbeddel ku yimaada hawada gudaha. Qalabka horey loo dhammaystiray waxaa jira dareemo diyaargarow oo kuleyliya oo koontaroolaya heerkulka heerkulka. Qof kasta oo beeraleyda digaaga ah waa inuu ogaadaa aasaaska shaqada qalabka, gaar ahaan sida nidaamka isku xirku uu yahay mid sahlan: ilaha kuleylku waxay ku xiran yihiin fiilooyinka korontada, korontada waxaa la siinayaa dadka kale, iyo dareeraha heerkulku wuxuu ku xiran yahay siligga saddexaad kaas oo qiimaha kuleylka la akhriyo.
Ma taqaanaa? Marka kaniiniyada kuleylka loo isticmaalo aquarium leh kalluun kulaaleed. Baahida Tani waxay sababtay xaqiiqda ah in moodooyinka badan ay leeyihiin hannaanka farsamoyaqaan leh kululeeyaha. Sidaa darteed, sii wad heerkulka u gaar ah. Qalabkani wuxuu si fiican u shaqeeyay qolalka oo leh heerkul deggan.
Wax soo saarka madaxbannaan ma suurtogal tahay
Haddii aad go'aansato inaad abuurto heerkulbeegga dhijitaalka ah ee naftaada, waxaa habboon in aad la xiriirto arimaha abuurka si masuuliyad leh. Kuwa aqoonta aasaasiga ah ee qalabka elektaroonigga ah iyo ogtahay sida loo maareeyo aaladaha qiyaasta iyo birta birtu waxay sameyn kartaa shaqo noocan ah. Intaa waxaa dheer, aqoonta faa'iido leh ee gudiyada wareegga wareegga, qaabeynta iyo qalabyada qalabka elektarooniga ah. Haddii aad diiradda saarto wax soo saarka warshadaha, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyinka inta lagu jiro kulanka, gaar ahaan inta lagu jiro marxaladda qaabeynta qalabka. Shaqada sahlan, waxaad u baahan tahay inaad doorato qorshe loogu talagalay wax soo saaridda guriga.
Waa muhiim! Daryeel gaar ah, baro tilmaamaha iyo saldhigga hoose ee qalabka la xushay. Fudud sida ugu fudud, qorshaha waxaa ku jiri kara faahfaahin yar.
Qalabka ugu muhiimsan ee nooc kasta oo qalab ah waa in la hubiyo dareenka sare ee xagasha heerkulka gudaha, iyo sidoo kale jawaab deg-deg ah oo isbeddelada noocan ah.
Si aad u abuurto heerkulbeegga loogu talagalay masraxa gacmihiisa, inta badan waa la isticmaalaa nidaam laba qaybood:
abuurista qalab leh qalabka korantada iyo raadiyaha raadkaba waa hab adag, laakiin la heli karo khabiiro;
abuurista qalabka, oo ku saleysan heerkulbeegga qalabka guryaha.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido sida loo sameeyo boogaarka digaaga adoo isticmaalaya gacmahaaga, iyo sidoo kale kuwa quudiya iyo kuwa cabta.
Mabda'a hawlgalka ee diirimaadka: sida wareega u shaqeeyo
Ka feker sida ay hawadu u shaqeyso, oo ay samaysay gacanta. Saldhigga qalabku waa "amplifier" amma "DA1", kaas oo ka shaqeeya qaabka isbarbardhigga farsamada. Voltage "R2" waxaa la siiyaa hal talobixin, tan labaad - xaddiga lagu qeexay "R5" iyo "R4". Si kastaba ha noqotee, iyadoo ku xiran codsiga, "R4" waa laga saari karaa.
Xilliga habka isbedelka heerkulka, iska-caabbinta "R2" ayaa sidoo kale isbeddela, isbarbardhiggu wuxuu ka jawaabayaa farqiga u dhaxeeya adigoo adeegsanaya signal "VT1". Xaaladdan, qalabka ayaa furfuraya tikhtarka "R8", cirbadeynta hadda, iyo ka dib marka la barbardhigo tamarta, "R8" ayaa ka goosanaya culeyska.
Awoodda kontoroolka waxaa lagu bixiyaa diode "VD2" iyo caabiga "R10". Iyadoo isticmaalka yar ee hadda la isticmaalo waa mid la aqbali karo, sida isticmaalka degganaanta "VD1".
Ma taqaanaa? Miisaaniyad heerkulku ku filan yahay oo ku filan hoyga guriga. Xakamaynta heerkulka 16 ilaa 42 darajo iyo baakadaha dibadda ayaa kuu oggolaanaya inaad isticmaasho qalabka xilli-ka-baxsan, tusaale, si loo xakameeyo heerkulka qolka.
Dad badan ayaa la yaabay sida loo sameeyo heerkulbeegga kuleyliyaha gacmahaaga.
Maadaama shirkad madax bannaani ay u aragto hab sahlan - Heerkulbeegga sida anshaxa. Doorashadani waa mid fudud in la sameeyo, laakiin aan la isku hallayn karin isticmaalka. Abuurku wuxuu u baahan yahay heer-kuleyaal, tusaale ahaan, birta ama qalabka kale ee guriga. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdid shaqada, tanina kiisaska kuleylaha waxay ka buuxsameysaa ether, ka dibna si fiican u xiran.
Waa muhiim! Xusuusnow in eter yahay walax xoog leh, sidaas darteed waa lagama maarmaan in si taxadar leh oo dhakhso ah ula shaqeyso.
Eber wuxuu u nugul yahay inuu si xasaasi ah u falceliyo isbeddelka ugu yar ee heerkulka hawada, taas oo saameyn ku leh isbeddelka xaaladda cimilada.
Qaadida, ku dheggan jirka, waxay ku xiran tahay xiriirka. Waqtiga saxda ah, qaybta kuleylka ayaa loo rogaa oo la dhigaa. Heerkulka waxaa la dejiyaa inta lagu jiro wareega wareegga. Ka hor intaan la dhigin ukumaha waxaa lagama maarmaan ah in lagu diiriyo qoorta. Way iska cadahay in ay fududahay in la soo saaro heer-kulka hawada, xitaa xannaanad iskuul ah oo jecel dareenka elektaroonigga ayaa sameeya. Xaafadku ma laha qaybo naadir ah oo aan la heli karin. Haddii aad adigu sameysid "hen, korontada," waxay faa'iido u yeelan doontaa inaad siiso qalab loogu talagalay wareegga tooska ah ee ukunta ee kuyaal-qaboojiyaha laftiisa.
Haddii aad tahay shimbir shimbir ah, waxaad sidoo kale u baahan doontaa baaritaan. Ku samee awooda gacantaada.
Isku xiridda heerkul-maskaxeedka kuleylaha
Markaad isku xirayso heer-kuleylka kuleylaha, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u ogaato goobta iyo shaqada qalabka:
heerkulku waa inuu ka baxsan yahay masraxa;
Dareemaha heerkulka ayaa hoos udhaca daloolka waana in uu ahaado heerka qaybta sare ee ukunta, adigoon taaban. Heerkulbeeggu wuxuu ku yaalaa isla goobta. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, fiilooyinka ayaa la dheereeyaa, oo xeer-ilaaliyuhu laftiisu waa dibedda;
walxaha kuleylka waa in lagu dhajiyaa qiyaastii 5 sentimitir oo ka sarreysa dareeraha;
socodka hawadu wuxuu ka billaabmayaa kululeeyaha, wuxuu ku sii socdaa aagga ukunta, ka dibna wuxuu galaa dareeraha heerkulka. Taageeraha, oo marba mid ah, wuxuu ku yaalaa dhinaca hore ama ka dib kuleyliyaha;
Dareemaha waa in laga ilaaliyaa shucaaca tooska ah ee kuleyliyaha, fanka ama iftiinka iftiinka. Mowjadaha noocan oo kale ah waxay u gudbinayaan tamarta hawada, dhalooyinka, iyo waxyaabaha kale ee hufan, laakiin ha ku dhex gelin warqad qaro weyn.